जिम्मेवारीमै बेखबर सुचना अधिकारी | Buddhavumi News
जिम्मेवारीमै बेखबर सुचना अधिकारी
५ फाल्गुन २०७५ १९:५२ February 17, 2019 buddha vumiLeaveaComment on जिम्मेवारीमै बेखबर सुचना अधिकारी
०५ फागुन । नेपालको संविधानको धारा २७ मा नागरिकको सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकको यस मौलिक हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ । आयोगले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा स्थानीय तहबाट सम्पादित काम सो अवधि सकिएको १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ, सूचना अधिकारी तोक्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । तर गुल्मीका केहि स्थानीय तहमा सुचना अधिकारी नै छैनन । भने भएका सुचना अधिकारी पनि स्थानीय तहका गतिविधिसँग अपडेट छैनन । सुचना अधिकारीलाई तालिम समेत नदिदाँ उनीहरु आफ्नो काम, कर्तब्य र अधिकारबारे नै अनविज्ञ छन् । चन्द्रकोट गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी बसन्त रावलले जिम्मेवारी सम्हालेको आठ महिना भयो । तर अहिलेसम्म एक जनाले पनि सुचना मागेका छैनन् । उनी पशु शाखा प्रमुख पनि भएकाले त्यतैतिर भ्याइनभ्याई छ । सुचना अधिकारी पहिलो अनुभव हो । ‘तालिम भए अल्लि अपडेट भइन्थ्यो, पशु शाखाको कामले नै फुर्सद छैन् ।’ ‘उनले भने, ‘काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा अनबिज्ञनै छौ ।’
इस्मा गाउँपालिकाको सुचना अधिकारी नारायण महत हुन् । उनी सुचना अधिकारी भएको दुई बर्ष बित्न थाले । अहिलेसम्म एउटा सुचना मात्रै आधिकारीक रुपमा दिए । गत बर्ष स्थानीय राजनैतिक दलले बाहेक अरु कसैले पनि गाउँपालिकाका आफुसंग सुचना नमागेको महतले बताए । माथीबाट जिम्मेवारी तोकिने तर तालिम र प्रशिक्षण नभएका कारण धेरै सुचना अधिकारीलाई काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा पत्तै नभएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका सुचना अधिकारी शकर प्रसाद गौतमले बताए । तत्कालिन जिविसको समेत सुचना अधिकारीको अनुभव लिएका गौतमले सजिलो सवै सुचना कार्यालय प्रमुखहरुले दिने र अप्ठ्यारा मात्रै सुचना अधिकारीलाई दिन लगाउने प्रवृति रहेको बताए । गाउँमा सुचना माग्ने कुरामा नागरिक सुसुचित नभएको र धेरैलाई कार्यालय प्रमुखसंगै सम्पर्क गर्ने भएकाले सुचना अधिकारीको काम प्रभावकारी नदेखिएको बताए । छत्रकोट गाउँपालिकाको सुचना अधिकारी बिष्णु प्रसाद ज्ञवाली हुन् । उनी सुचना अधिकारी भएको करिव दुई हप्ता भए । उनको यो पहिलो अनुभव पनि हो । तर कुनै काम कर्तव्य र अधिकारका बिषयमा तालिमहरु प्रदान गरिएको छैन् । ज्ञवालीले पनि तालिम तथा गोष्ठिहरुमा सहभागी गराएर मात्रै जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सुचना अधिकारीनै छैनन्
मालिका गाउँपालिका र रुरु गाउँपालिकमा सुचना अधिकारी नै छैनन् । कर्मचारी अभाव भएका कारण सुचना प्रविधी अधिकृतलाई सुचना अधिकारी तोकिएको छ । स्थानीय तहमा सुचना अधिकारी र सुचना प्रविधी अधिकृत दुई वटा पद छन् । उनीहरुको काम कर्तव्य र अधिकार फरक हो । तर कर्मचारी अभावले प्रविधी अधिकृतलाई सुचना अधिकारी तोकिएको मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ पोखरेलले बताए । रुरु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरीले कार्यालय प्रमुखभन्दा एक तह तल्लो पदलाई सुचना अधिकारी तोक्नुपर्ने भएकाले सुचना प्रविधि अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिएको बताए ।
सुचना अधिकारी नै सुचनाको पहँुच बाहिर
मालिका गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी जगत पौडेलले कार्यालयका सवै सूचनाको पहुँच आफुहरुलाई नहुने गरेको बताए । कार्यपालिका र अरु महत्वपूर्ण बैठकहरुमा आफुहरुलाई जान अनुमति नभएकाले केहि कुरा वाहिर आएपछि मात्रै थाहा हुने बताए । साथै पौडेलले सुचना र गोपनियताका कतिपय बिषयहरुमा सुचना अधिकारीहरु अनबिज्ञ बन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । जसका कारण समय–समयमा तालिमहरुको आवश्यक पर्नेमा जोड दिए । धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मधु घिमिरे हुन् । उनी केहि समय अघि सोहि गाउँपालिकाकै सुचना अधिकारी थिए । उनले नागरिक र सुचना अधिकारीलाई सुचनाको हक पत्रकारको लागि मात्रै हो भन्ने भ्रम रहेको बताए । घिमिरेले नागरिक आफुले पाउने सुचनाको बारेमा सचेत नभएसम्म सुचना अधिकारी र सुचनाको हक प्रभावकारी नहुने बताए ।
सुचना अधिकारीले सुचना नै दिदैनन्
पत्रकार शिवलाल सुवेदीले धेरै स्थानीय तहका सुचना अधिकारी कार्यालयका सुचनामा अपडेट नभएकाले आफुहरुलाई समस्या हुने गरेको बताए । उनले केहि दुर्गममा फोन समेत नलाग्ने र लागेको बेलामा पनि सामान्य सुचनामा सुचना अधिकारी अपडेट नभएको आरोप लगाए । उनले कार्यालय प्रमुखले धेरै बिषयमा आफैले भन्न खोज्ने र सुचना अधिकारीलाई धेरै सुचना पनि नदिने अवस्था रहेको बताए । अहिले स्थानीय तहमा प्रवक्ता समेत तोकिएको छ । स्थानीय तहले गरेका महत्वपूर्ण सुचना सार्वजनिक गर्न प्रवक्ताको व्यावस्था गरिएको भएपनि उनीहरुको अवस्था पनि सुचना अधिकारीको जस्तै छ ।
भ्रष्ट्राचारले देशलाइ गाँज्यो, यसलाइ रोक्न पुरा प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ – पुर्वप्रम डा. भट्टराइ !
प्रधानमन्त्री आउने भएपछि हीरक महोत्सवको तैयारीमा कसरी अघि बढ्दै छ विद्यालय ? हेरौ भिडियो रिपोर्ट
इस्मा गोरु काण्ड निर्दोष गोरु : हत्या गर्ने बुहारी
२२ पुष २०७६ १६:०२ January 7, 2020 buddha vumi
स्वर्गिय बाबाको सम्झनामा घिमिरे परिवारद्धारा बिद्यालयलाइ टेलिफोन सेट प्रदान ।
३ फाल्गुन २०७५ ०८:३० February 15, 2019 anish gaire
नेकपाको सपथ ग्रहण चल्दै, एक वर्ष सुसुप्त रहेको पार्टि परिचालन सुरु ।।
९ जेष्ठ २०७६ १८:०२ May 23, 2019 buddha vumi
पशुपतिमा दर्शनार्थी बढे तर व्यवस्थापन फितलो
काठमाडौं – पशुपतिनाथमा दर्शन गर्ने दर्शनार्थीको [पुरा पढ्नुहोस]
काठमाडौं – गाउँपािलका केन्द्र मिलाइदिन भन्दै जाजरकोटको [पुरा पढ्नुहोस]
प्रहरी हिरासतमा यातना दिएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन
दाङ–घोराही उमनपा–१४ का ३७ वर्षीय कुम्वीर बुढालाई [पुरा पढ्नुहोस]
अस्प्तालमा छोरी घर पुग्दा छोरा !
गोदावरी नगरपालिका ८ जमुनाभाडीकी २३ बर्षीया काली खातीले [पुरा पढ्नुहोस]
टोपलाल अर्याल, गुल्मी, २१ माघ । गुल्मी जिल्ला अस्पताल [पुरा पढ्नुहोस]